Etu ị ga-esi gbakọọ uru ndụ onye ọrụ ekwentị mkpanaka gị | Martech Zone
Anyị nwere mmalite, ụlọ ọrụ ndị guzosiri ike, na ọbụna nnukwu-nchịkọta na ụlọ ọrụ ọkaibe na-abịakwute anyị maka enyemaka iji zụlite azụmahịa ha n'ịntanetị. N'agbanyeghị oke ma ọ bụ ọkaibe, mgbe anyị jụrụ maka nke ha ego-per-nnweta na ndu ndu (LTV) nke onye ahịa, anyị na-ahụkarị oghere na-enweghị isi. Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-agbakọ usoro mmefu ego n'ụzọ dị mfe:
Site n'echiche a, ahịa ikuku na-abanye na kọlụm efu. Mana ahia abụghị ihe efu dị ka ụgwọ ụlọ gị… ọ bụ itinye ego kwesịrị ịrụ ọrụ iji bulie azụmaahịa gị. Enwere ike ịnwa gị ịgbakọ na ọnụ ahịa iji nweta onye ahịa ọhụrụ bụ ego dollar, na uru ahụ bụ ego ị nwetara na nzụta ha. Nsogbu dị na nke ahụ bụ na ndị ahịa anaghị eme otu ịzụta. Inweta onye ahịa bụ akụkụ siri ike, mana onye ahịa nwere obi ụtọ anaghị azụta otu oge wee pụọ - ha zụrụ karịa ma nọrọ ogologo oge.
Kedu ihe bụ Ndụ Ndị Ahịa (CLV ma ọ bụ CLTV) ma ọ bụ Ndụ Ndụ (LTV)?
Ahịa ahịa uru (CLV ma ọ bụ mgbe mgbe CLTV), ndụ ahịa uru (LCV), ma ọ bụ ndụ-oge uru (LTV) bụ gbakọọ uru na a ahịa ga-enye gị ụlọ ọrụ. LTV anaghị ejedebe na azụmahịa ma ọ bụ ego kwa afọ, ọ gụnyere uru a rụzuru maka oge mmekọrịta gị na onye ahịa gị.
Kedu usoro iji gbakọọ LTV?
LTV = Ndụ Oge
ARPU = Nkezi Onu ego na onye oru. Enweta ego nwere ike si na ngwa ngwa, ntinye ego dabere na ndenye aha, nzụta ngwa, ma ọ bụ ego mgbasa ozi.
Afụ ọnụ = Pasent nke ndị ahịa furu efu karịa oge enyere. Ngwa ndenye aha na-abụkarị ego ha na-enweta, ngwa ngwa, na mmefu ha.
Ọ bụrụ na ị na-emepe ngwa mkpanaka, lee ihe ọmụma sitere na Dot Com Infoway - Gbakọọ Uru Oge Ndụ Gị (LTV) nke Ndị Ọrụ Ngwa Gị Maka Mgbapụta na Ọganihu Dị Ukwuu - nke ahụ na - enye ngagharị ma ị tụọ LTV onye ọrụ ngwa mkpanaka gị. Ọ na-enyekwa ụfọdụ ụzọ iji belata afọ ojuju na ịbawanye uru.
Obi abụọ adịghị ya na ọtụtụ mmadụ na-etinyekarị oge ha n'ịntanetị na ngwa ngwa ekwentị. Ọ bụ ezie na nke a nwere ike ịpụta ndị ọrụ na ngwa gị, ọ pụtaghị na ndị ọrụ gị niile ga-aba uru. Dị ka ọ bụ eziokwu maka ọtụtụ ụdị azụmaahịa, ego 80% na-abịa site na ndị ọrụ 20%. Thetụle LTV nke ndị ọrụ nwere ike inyere ndị mmepe ngwa aka ịbelata ndị ọrụ ha kachasị mma ma mepụta onyinye na nkwalite iji kwụghachi ụgwọ ntụkwasị obi ha iji bulie njigide. Raja Manoharan, Dot Com Infoway
Ozugbo ị ghọtara uru ndụ onye ahịa gị bara, tụọ ọnụego gị, tụlee ego iji nweta onye ahịa, ị ga-aghọta itinye ego ị na-eme yana nloghachi nke ego ahụ.
Nwere ike ịmezi mgbanwe na nke ọ bụla ma ọ bụ mgbanwe niile. Nwere ike ịbawanye ụgwọ ọrụ gị iji jigide uru bara uru. Nwere ike itinyekwu ego na ọrụ ndị ahịa iji jigide ndị ahịa gị ogologo ma mụbaa ụtụ na ngwa ma ọ bụ ogologo oge. Nwere ike ịrụ ọrụ iji belata ọnụ ahịa nnweta ndị ahịa site na atụmatụ aghụghọ na usoro. Ma ọ bụ ị nwere ike ịchọpụta na ị nwere ike itinyekwu ego na atụmatụ ịkwụ ụgwọ akwụ ụgwọ.
Tags: gbakọọchurnchurn ọnụegoCLTVCLVeri kwa nnwetaahịa nnwetanjigide ndị ahịaDcintụpọ inf infayayusoroesi gbakọọ ltvinfographiclvvmobile ngwangwa mkpanaaka ltvmobile ngwa ahịamobile ngwa roiihe bụ ltv